कोरोना संक्रमित | Trends | Samacharpati कोरोना संक्रमित – Page 31 – Samacharpati
पर्वत, ५ असार । पर्वत अस्पतालका आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द भएका छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणमा पाँच स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालले शुक्रबारदेखि सेवा बन्द भएको जनाएको छ । कोरोना अस्पतालमा कार्यरत सातजनाको नमूना परीक्षण गरिएकामा पाँचजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ । यसअघि भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका ३८ जनामा कोरानो […]
चितवन, ५ असार । चितवनका ७४ वर्षीय फोक्सोका क्यान्सर पीडित एक वृद्ध एक महिनापछि कोरोनामुक्त भएका छन् । उनी सहितकोरोना संक्रमित उनकी पत्न पनि निको भएपछि डिस्चार्ज भएकी छन् । झन्डै एक महिनाअघि ती वृद्ध र उनकी श्रीमतीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी परिवारसहित भारतमा क्यान्सरको उपचार गराएर फर्किएका थिए। घर फर्किएर कोरोना परीक्षण गर्दा […]
पर्वत, ४ असार । पर्वतमा थप पाँच जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पर्वत जिल्ला अस्पतालका अनुसार चितवनको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप पाँच जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । उनीहरु सवै भारतवाट फर्किएर कुश्माको पुलिङ क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । यो सँगै पर्वतमा […]
पोखरा, ४ असार । गण्डकी प्रदेशमा बिहिबार ५ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । थपिएका ५ जना नै पर्वतका रहेका छन् । यसको जानकारी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बिहान ८ बजे सुचना जारी गरेर जानकारी दिएको हो । यससंगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या २९४ पुगेको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक तथा गण्डकी प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा […]
पोखरा, ४ असार । मनाङ जिल्लामा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । गण्डकी सस्वास्थ्य निदेशनालयला जारी गरेको सुचनामा मनाङमा एक जनालाई कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि भएको उल्लेख छ । संक्रमित व्यक्ति मनाङको चामे गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी रहेको बुझिएको छ । कपिलवस्तुको बाढगंगा १४ स्थायी ठेगना भएका कर्मचारी कपिलबस्तुबाट मनाङ फर्किएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक डा. […]
गण्डकीमा ४२ जना नयाँ संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या २८९ पुग्यो
पोखरा, ४ असार । गण्डकी प्रदेशमा बिहिबार ४२ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यससंगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या २८९ पुगेको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक तथा गण्डकी प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डा. विनोद विन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो । नयाँ थपिएका संक्रमित गण्डकी प्रदेशका ४ जिल्लाका रहेका छन् । जसअन्तरगत नवलपरासी सुस्ता […]